Ilay Andro Naha-dibo-drano An’i Dhaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Septambra 2015 5:05 GMT
Orambe nikija niteraka fitohanan'ny rano tamin'ny faritra marobe tao an-tanànan'i Dhaka, niafara tamin'ny fahasahiranan'ny mponina. Sary an'i Sourav Lasker. Fizakàmanana Demotix (1/9/2015)
Nanorana nanerana ny firenena tao Bangladesh tamin'ny herinandro lasa: orana manify, oram-batravatra, ary orana nitsitapitapy. Saingy tsy mbola nisy zavatra toy ilay natrehan'i Dhaka renivohitra tamin'ny Talata lasa teo—orana nahatratra 42 milimetatra tao anatin'ny ora iray sy sasany monja. Nahatondraka ny arabe maro tao Daka ilay firotsahan'ny orana tamin'io fotoana io, nitondra jaly henjana ho an'ireo mponina an-tanàndehibe noho ny fitohanana ben'ny fifamoivoizana teny amin'ireo sampanana be mpampiasa. Maro tamin'ireo olona tao an-tanàna no nisedra olana goavana ary fahataràna noho ny loza tsy mahazatra nateraky ny rano nameno ny arabe.
Tamin'ity taona ity, voalahatra ho faha-2 amin'ireo tanàna tsy maha-te-honina indrindra eto an-tany i Dhaka tao anatin'ny fandaharana isan-taona navoakan'ny Economist Intelligence Unit (EIU). Zavatra mitarazoka ny olan'ny rano mihandrona ao Dhaka satria efa ntaolo be ny foto-drafitrasa famoahana rano, miaraka amin'ny fitobahan'ireo tetikasa fanorenana sy ny fahatsentsehan'ny fantsona fanariana rano. Na orambatravatra anaty fotoana fohy aza, marobe ny arabe no vetivety dia tondraka, ary aorian'izay, ora maro no ilaina vao ritra ny rano.
Nivandravandra be ny fahasorenana tao amin'ny Twitter sy ireo media sosialy hafa:
Toy ny korontana ambony ambany i Dhaka androany, rano no mameno tanàna, tsy azoko nidirana akory ny *ampidiro ny anaranà làlana*, tsentsina ny fivoahan-drano….
Sahirana ireo avy any ambanivohitra mandalo ao Dhaka noho ny rano mihandrona
Mahazatra ny oram-baventy ao Dhaka fa tsy ny fahatondrahan'ireo arabe fandehanana malaky. Hita eny rehetra eny ny marika. #COP21
Ny sasany amin'ireo mpampiasa Youtube, toa an'i Saifur Rahman sy Shofikul Islam, nizara saripika momba ny rano mihandrona tao an-tanàna.
Fiara fitaterana anaty rano ao an-tanànan'i Dhaka
Araka ny Tale Mpanatanteraky ny Sampan-draharaha misahana ny Famatsiana Rano sy ny Famoahana ny rano maloto (WASA) ao Dhaka Taksim A Khan, 26 amin'ireo 56 fantsona fanariana rano no miasa, nefa tsy tena zato isanjato koa. Na izany aza, raha tsy vitan'ireo manampahefana ny miantoka ny familiana ny ranon'orana ho any amin'ny toerana tokony halehany, dia mbola midika izany fa tsy afaka ny ho voavaha ny olana.
Nahita antony iray hanaovana vazivazy momba ilay loza voajanahary i Naveed Mahbub, mpanao hatsikana.
Tafiditra ao anatn'ny resaka Fifanarahana momba ny rano eo amin'i India sy Bangladesh ve i Dhaka ankehitriny?
Betsaka ny sary mahatsikaiky mitondra fahazavana momba ireo toetrandro ratsy no lasa mivezivezy be sy zaraina be ety anaty media sosialy (sary natolotr'i Anis Sarker, Moja Loss sy Keu Amare Mairala):
Sambo fiampitàna avy ao Gulistan mankao Gabtoli mandalo an'i Dhanmondi (tonga eny an'arabe ao Dhaka ny fitaterana an-drano)
“Faly aho fa lasa firenena manana fidiram-bola antonony fotsiny ihany isika”
“Hatreo amin'ny valahana ihany ny rano. Raha firenena manana fidiram-bola avo isika, alaivo sary an-tsaina izay mety hitranga.”
Soa fa nentiko nanaraka ahy nivoaka ny eloko!
Shyamal Ghosh nanoratra tao amin'ny Facebook, manainga ny olona rehetra hifoha handinika ny halehiben'ny olana :
Tsy ao Dhaka ihany, fa ny ankamaroan'ireo tanàna ao Bangladesh dia miatrika (ilay) olana mitovy avokoa noho ny orana (&) tondradrano, saingy toa tsy misy olona any hiresaka momba (azy) io. Aiza ireo mpikatroka mpiaro tontolo iainana, aiza ireo mpanao drafitry ny tanàna? Toa sahàla amin'ny tsy misy olona te-hanan-draharaha na inona na inona (amin'io), efa manomboka zatra amin'io daholo ve ? […] Mifohaza…!
Velarin'i Hasibul Haque ny zava-misy, tamin'ny fanazavàna ireo antony miteraka ny fihandronan'ny rano :
Niaina rotsak'orana maharitra sy mihoatra 40 isanjato amin'ny sala isan-taona i Bangladesh tamin'ity taona ity, ary horaketina ho ny fatra avo indrindra tato anatin'ny folo taona farany. Raha marina fa mifamatotra amin'ny fanorenana tsy manara-dalàna eny amin'ireo renirano ao anatiny sy manodidina an'i Dhaka ny rano mihandrona ao Dhaka, tsy isalasalàna fa izay efa novinavinain'ireo mpahay siansa momba ny toetrandro hatry ny ela ity toetrandro henjana tafahoatra ity—toy ny vokatry ny fiovan'ny toetrandro niteraka ny fiakaran'ny hafanàna erantany.
Kanefa, niangavy i Saif Kamal mba tsy ho ny fiovàn'ny toetrandro no hanilihna ny zavatra rehetra :
Eny, mitarika ho amin'ny firotsahan'ny orana ny fiovàn'ny toetrandro, ary tondraka daholo ny tanàna tsirairay, saingy tsy mitoko zihitra tahàka izao ny rano! Eny, ny vahoaka no manentsina ny fivoahan'ny rano amin'ny fakony. [..]
Nametraka fotodrafitrasa tsaratsara kokoa ho an'ny fanariana rano ve isika? Mba nianatra ny nametraka ny fako amin'ny tena toerany ve isika? Voaloto hatramin'ny 98 % ireo renirano manodidina antsika.
Aza mametraka fanontanina tsy mijery lavitra tahaka izany isika fa izay hanomezana ireo tolotra laharam-pahamehana no takio.
Ora-mikija mitondra ho amin'ny tondradrano henjana sy fitohanan'ny fifamoivoizana any amin'ny ankamaroan'ireo faritra ao Dhaka renivohitr'i Bangladesh.. Sary an'i Sk Hasan Ali. Fizakàmanana Demotix (1/9/2015)
Brahmanda Pratap Barua Ripon koa mino fa ny fako no tokony ho tsiniana:
Saiky dibo-drano avokoa ny ankamaroan'ireo arabe ao afovoan-tanàna, nefa iza no homena tsiny ? Isika tsy manaraka velively ny tokony ho fitantànana ny fako ve sa ireo mpanorina manao mamba noana izay miezaka fotsiny ny hahazo vola amin'ny fandrakofana ireo honahona sy farihy rehetra. Ny tena mahatsikaiky dia ny governemanta no omen'ny vahoaka tsiny amin'ity ranobe mameno tanàna ity.
Mahfuz Rahman nihevitra fa ifampizaran'ny olom-pirenena tsirairay ny tsiny sy ny vahaolana amin'io :
Voamariko tato anatin'ny andro vitsy fa rakotra saripika misy olona mitaingina Iàkana eny an'arabe, na ny toy izany, ny fizotry ny fanehoankevitra tao amin'ny facebook-ko. Fitarainana & fitarainana etsy sy eroa.
Holazaiko fa voajanahary ny 20 % ary voatr'olombelona ny 80 % amin'io. Azo raisina tsara io toe-javatra io ary mbola hitranga hatrany rehefa tsy isika no manatsahatra ny fanipàzana fako eny an'arabe, fantsona fanariana rano, na eny rehetra tsy tokony hanariana azy eny.
Mbola ho hita eo izay fomba heverin'i Bangladesh hiatrehana ny ora-mikija tahàka izao amin'ny manaraka, izay tsy azo ialàna aty amin'ity faritra jeografika ity. Mety io no ho asa voalohany miandry ny ben'ny tanàna vaovao ao Dhaka—ho fitsapàna ny fahaizan-dry zareo mitantana.